Akwụkwọ Matt Shanahan na Martech Zone |
Edemede site na Matt Shanahan
Kate Legett, VP na onye isi nyocha na Forrester na September 2015 blog post dere na post ya, CRM bụ Fragmenting. Ọ bụ A Esemokwu Isiokwu: Nọgidenụ na-ahịa ahụmahụ n'ihu na etiti nke ụlọ ọrụ gị. Jide n'aka na ị na-akwado ndị ahịa gị site na njedebe ha iji kwụsị njem dị mfe, dị irè, na-atọ ụtọ, ọbụlagodi mgbe njem ndị ahịa gafere nyiwe teknụzụ. Nkọwa nke CRM na-emepụta ihe mgbu na-adaba na ahụmịhe ndị ahịa. Nkwupụta igwe ojii 2015